Ikhaya I-CLASSIC FOOTBALLER I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele yeNgoli yeBhola yaseNigeria eyaziwa kakhulu ngegama; "I-Master Shot". Indaba yethu ye-Sunday Oliseh Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF futhi ON-Pitch amaqiniso angakaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi wadutshulwa kanjani emdlalweni we-1998 World Cup ngokumelene neSpain, kodwa bambalwa abheka i-Bio ye-Sunday Oliseh eyathandekayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
NgeSonto Ogochukwu Oliseh wazalwa ngosuku lwe-14th lukaSepthemba 1974 e-Abavo, eDelta State, eNigeria. Wazalelwa abazali bakhe bamaKatolika uMnu noMnu Oliseh. Uyise wayengu-accountant, kanti unina ungumfazi wezamabhizinisi osetha umhlalaphansi.
U-Oliseh uqale ukukhahlela ibhola kusukela ngesikhathi engahamba ngayo emzaneni wase-Abavo, e-Delta State. Wakhula nabafowabo (abafana baka-6 ne-1 intombazane) e-Lawanson, eSurulele, e-Lagos State. Ngezansi isithombe seSonto nomfowabo omdala.
ISonto u-Oliseh wayenemfundo yakhe eyinhloko eBright Starr Nursery and Primary School (Ojota). Ngesikoleni sakhe esiphakeme, waya esikoleni se-Ajao Estate High (u-Anthony Village) nesikole samabanga aphezulu aseMethodist, bonke baseLagos State, eNigeria. Lezi zikole zanikeza ithuba lokudlala ibhola lezemidlalo ngesikhathi sokudlala. Ngenxa yenkinga yemvelo ngaleso sikhathi, u-Oliseh wasebenzisa yonke into yesibili wayenekhefu phakathi kwamakilasi okudlala ibhola.
Emuva ekhaya, waphikisana nakho konke. Njengoba u-Oliseh ebeka; "Kusukela ngisemncane, kwakukhona ukuncintisana kukho konke. Kwakukhona ukuncintisana kokudla, ukuncintisana ngothando lwabazali bami, ukuncintisana kokuhlala phansi kwefa, -uma ungahlali phansi ekuqaleni, uzobuka i-VILLAGE HEADMASTER phansi. Ngithwele lo mncintiswano esikoleni. "
Kwakungekho isiteshi sethelevishini esisebenza emini, ngalokho u-Oliseh kuzodingeka adlale ibhola kanye nabangani bakhe ukuqinisekisa ukuthi ubuyela ekhaya ngaphambi kokuba uyise abuye emsebenzini. Ubaba wakhe uvame ukumshaya uma ebona edlala ibhola. UMnu Oliseh Snr wayevimbela indodana yakhe ekudlalweni kwebhola ngenxa yenkolelo yokuthi wayenayo imali, uxhumano futhi ukholelwa ukuthi akazi ukuthi ubani owenza impilo enhle ngaphandle kwebhola.
I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
Ibhola lika-Oliseh lalihlukile ngesikhathi edlala nabangani bakhe ngoba wayesebenzise okuningi lokho abangane bakhe abangenakukwenza. Umehluko phakathi kwakhe nabangane bakhe kwakuyikhono lakhe lokusebenzisa 'UJogo Bonito' okusho ukunikeza ukuzijabulisa okukhulu kanye nokuhamba kwebhola elihle kakhulu. Le nqubo inomsuka wayo UPele futhi kamuva wamukelwa Neymar.
U-Oliseh waqhubeka edlala ibhola ukuze azijabulise, wayengazi ukuthi ibhola elizokhipha umndeni wakhe kude nobubha. Kwenzeka ukuthi, ngesikhathi esithile esikoleni (ukuhlanganisa isikole nokudlala iqembu lakhe lakuleli), u-Oliseh ukhokhelwe isamba sakhe sokuqala ngeqembu lakhe lendawo. Ngokushesha, wathatha imali ekhaya ukuze anikeze uyise owayengamanga nje kuphela kodwa wabiza bonke abafowabo ukuthi: "Umfowenu ukhokhelwa okungaphezu kwalokho engikhokhelwa njengomphathi we-akhawunti ". Lokhu kwaba lapho u-Oliseh Snr eqala ukuba nokholo endodaneni yakhe.
Ngonyaka we-1990, ngenkathi ku-Julius Berger Fc futhi esesesikoleni, u-Oliseh wathola isimemo Mr. Claude Bissot, (sengathi umphefumulo wakhe obusisiwe uphumula ngokuthula) I-agent yaseBelgium, eBelgium ukuhlolwa. unyaka wawuyi-1990. Ngo-1st kaJulayi 1990, egibele i-Swissair indiza eBrussels ngeZürich, u-Oliseh waya nakho konke ayekukho $ 50, isikhwama sezemidlalo se-Adidas, izicathulo zebhola, izinto ezimbalwa kanye nento yakhe eyigugu kakhulu, "I-Holy Bible ".
Efika eBelgium, u-Oliseh waqaphela ukuthi isifundo sokuqala sokuqeqesha sasilungiselelwe. Uyamangala ukuthi ukuqeqeshwa kwaphela ngokushesha kanti umqondisi weqembu wathi umhlophe owamlethela ethi ..."Kusukela ekuchazeni kwakho kulo mfana, Sasicabanga ukuthi ulungile kodwa wayengazi ukuthi ubuhle kakhulu. Sivumile ukumsayina ". Ukumangala kwalesi sikhulu, u-Oliseh ungene ngemvume eqenjini lokuqala likaRFC Liege. Yilokho u-Oliseh azinike khona ngokuphelele eYurophu.
U-Oliseh uthole usizo lokuziphatha UStephen Keshi (edlala e-Anderlecht ngaleso sikhathi) eyamsiza ukuba ahlale eBelgium. Ngemuva kosuku u-Oliseh wenza i-League debut yakhe, umqeqeshi wakhe wabiza wathi kuye, "Mina ngeke bakwazi ukukudlala kaningi ngoba awukhulumi ulimi lwaseBelgium ". Lapho ezwa lokho, u-Oliseh wadabuka, esho engqondweni yakhe "Njengoba ngiyazi ukuthi ngikhulume ulimi [Ika Lanuage] olwomncanyana eNigeria, manje, ngilapha, ngisemncane kakhulu". Oliseh ngokushesha wawela umgwaqo futhi waqhubeka ethengisa incwadi yelwimi. Ekugcineni, wazi ukuthi angakhuluma kanjani isiFulentshi, isiJalimane, isiNtaliyane nesiDashi. Uzibonele edlala kumaqembu e-8, kuhlanganise no-Ajax, uJuventus noDortmund. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kwayo yonke indoda enhle, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo inkulumo iya. Futhi ngemuva kwawo wonke umuntu waseNigeria owayengumdlali we-football wase-Atlanta 1996, kwakukhona umfazi othakazelisayo noma umthandi. U-Oliseh wathandana noHafidah, owesifazane ongumTopiya nesakhamuzi saseBelgium ngesikhathi sakhe sokuqala sokuqala. Ushade nomkakhe omuhle waseBelgium Moroccan, uHafidahh nje emva kweNdebe yoMhlaba ye-1994. Ngezansi isithombe sezinyoni ezimbili zothando.
Lo mbhangqwana ugubha iminyaka engaphezu kwe-20 yomshado futhi banabantwana ababili abathandekayo; Indodana engumdala uDenzel nendodakazi. Ngezansi isithombe se-2015 sikaDenzel Oliseh nodadewabo.
U-Oliseh usho njalo ngomkakhe .."Umkami ungumuntu ongavamile futhi okhethekile futhi ngaphandle kwakhe, angilutho. Phakathi nezinsuku zami ezimatasa njengomdlali webhola lezinyawo, wayemi eceleni kwami, ikakhulukazi njengomphathi wendlu. " U-Oliseh usho kanje ukuthi umkakhe nezingane zakhe bamthukuthelela ngokusebenzisa imali yakhe eNigeria Football Federation lapho inhlangano ihamba.
I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -I-ThunderBolt Shot
Into eyodwa ekhunjulwa ngeSonto Oliseh ngumgomo wakhe wokudumaza emdlalweni wesigaba phakathi kweNigeria neSpain e-1998 World Cup eyabangela iNigeria ukuba iphumelele. Iphoyisa lichazwe ngokuthi liqhuma njengoba lixoshwa ngamagceke e-25 ngqo enetheni, kumangala umgcini wezinyawo waseSpain.
Ngokuthakazelisayo, kwakuwukusebenza kwakhe ngalolo suku olubambe amehlo e-scouts ase-Italy emasimini.
I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Indaba ye-Atlanta 1996
E-Atlanta 1996, iNigeria yayimpofu kakhulu njengenhlangano. Akekho owazi ukuthi bayothola lokho. Ithimba lafika kuma-semi-finals e-Atlanta futhi laphawula ukuthi kwakungekho ilungiselelo lehhotela kubo. Bahlala eN Motel, indawo lapho amadoda athatha intombi yabo kanye neziphoyisa ukuze babe nekhwalithi. Endleleni enkulu kakhulu, kwakukhona amahhotela ezinkanyezi ezinhlanu, lapho iqembu laseBrazil ne-Argentina lihlala khona. Ngesikhathi i-Nigeria idlala imidlalo yaseBrazil, amasela asula ihhotela laseBrazil lahlala futhi laphanga ithimba laseNingizimu Melika lezinto zabo. Ithimba laseBrazil lalahlekelwa yizinto ezingu-$ 55,000 zezinto futhi abaseNigeria abalahlekelwa lutho.
Ngemuva kwama-Olimpiki, u-Oliseh waya e-Ajax. Uvotelwe ibhola le-3rd ye-Afrika e-1998 yi-CAF konke ngenxa yokuzivumelanisa kwakhe ngemuva kokuba umdali wegolide e-Atlanta 1996.
I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukubalekela eNigeria
U-Oliseh kuthiwa uhlala e-paranoia ngenxa yokwesaba ukuthi abantu abathile baphila ngemuva kokuphila kwakhe ngesikhathi engumqeqeshi kazwelonke waseNigeria. Ngemuva kokuthola igciwane kwelinye lezabelo zakhe ezisemthethweni, imithombo yamagoli yazisa ukuthi lowo owayengumdlali weJuventus usho ukuthi izitha zakhe ziphikisana nemimoya empilweni yakhe futhi uthembisa ukubalekela kude nezwe lapho angazange ahambe khona ukuze amhlasela. Ngamazwi akhe ...
"Ngelinye ilanga ngenkathi ngiqeqesha ama-Super Eagles e-Abuja Stadium ngaphambi komdlalo weBurkina Faso, ngingazizwa ngizungeze isizungu, ukukhanya okukhululekile, ukuphathwa ikhanda futhi ngangingakwazi ukuma. Ngakwazi ukuqeda iseshoni ngaphambi kokubizela udokotela egumbini lami engangenakuqhathaniswa nalokho okwakwenzeka. Ngokungazelelwe, ngaqala ukubheka ukulala ebusuku, ukuphelelwa yisifiso, ukucindezeleka kwegazi futhi ngaphambi kokuba ngiyazi ukuthi ngaqala ukulahlekelwa isisindo. Ngemuva kokuvakashelwa odokotela eziningana kwamanye amazwe, akukho lutho olutholakali futhi abakwazanga ukukhomba imbangela yesifo sangempela.
Ngaphambi kohambo olude oluya eBurkina Faso lomdlalo wokugcina we-CHAN ePort Harcourt ngemuva kokudla kwasemini, ngashaywa futhi ngecala lokuhlasela okungokomoya. Lesi sikhathi, angikwazi ukuhamba nokukhuluma. Nganginamahloni. Kwakungathi ngizophuma. Ngaso leso sikhathi ngafika eJalimane ukuze ngihlole. Odokotela abangihlola bangabonakalisa ukuthi ngisinde kancane ukuwa eNigeria. Ngalesi sikhathi, ngase ngilahlekelwe ama-kilo ayisikhombisa. Umndeni wakithi wawukhathazekile futhi bonke babesaba okubi kakhulu.
Into eyodwa yayiyiqiniso nakuba: ngabe angizange ngithathe indiza yangebusuku eJalimane ngenkathi ngiyenzile, bekukhona kungenzeka ukuthi kube nomphumela onamandla kakhulu. Bongani uNkulunkulu ngesihe sakhe, "
"Uhlale esaba ekamu futhi esolisayo ngisho namalungu akhe i-backroom abasebenzi ", umthombo oseduze wethimba ukwaziswa. Lo mthombo uthe umqeqeshi owaziwayo ngesikhathi esolwa ngokubhekene nabasebenzi bakhe wabatshela ukuthi kunabathakathi abaningi nabalusi abazama ukwehlisa impumelelo ye-Eagles.
"Waxwayisa labo abafisa ukubeka izandla noma umunwe ephaketheni labo ngaphambi kokumthukuthelisa ukuba bayeke noma bahlale bexosha izandla ngoba besaba ukuthi bathinta izinto ezifihliwe emaphaketheni ngaphambi kokuba bathuthele", Kusho umthombo.
I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Njengoba kukhulunywe ngaphambili, u-Oliseh uvela emlandweni wezinga eliphansi lomndeni. Uyise wayengumuntu we-akhawunti futhi kwakuyiphupho lakhe ukulandela izinyathelo zikayise. Kwakungumdlalo weBhola owamane nje.
Abafowabo abancane, u-Azubuike no-Egutu, nabo bangabalandeli bebhola. Umfowabo omdala, uChurchill Oliseh naye ubambe iqhaza elikhulu ebhola. I-Churchill (isithombe ngezansi) ngumnikazi we-FC Ebeidei. Izithombe zikaChurchill zisetshenziswe ngabakhohlisi baseNigeria abahlukumezayo abasha bebhola abafuna ukuthutha ukudlala ibhola le-European. Ngezansi isithombe se-Oliseh abadlali bebhola lezinyawo.
Njengamangalelwa, uSonto Oliseh nguye owabeka bonke abafowabo. Akakholelwa ekunikezeni imali emndenini wakhe kodwa ukholelwa ekusunguleni umndeni wakhe nabangane bakhe. U-Oliseh ubusiswa ngodade oyedwa ogama lakhe linguTessy onguyiklami nomqondo wokudala ngemuva kweTesslo Concept. Ushadile no-Ohimai Amaize aboniswe ngezansi.
I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi Wokuwa
Naphezu kokubamba iNigeria ngesikhathi se-2002 African Cup of Nations, u-Oliseh washiya iqembu lakhe leNdebe yoMhlaba emuva kwalowo nyaka ngenxa yezizathu zokujeziswa. Ngemva kokulahlekelwa ukhetho lweNdebe yoMhlaba, u-Oliseh washiya umqeqeshi webhola emhlabeni wonke ngoJune 2002 ngokuhola iqembu njengoba befuna izibonelelo ezingakhokhelwa kanye nemali ekhokhwa ukuba ikhokhwe. U-Oliseh ushilo ngokudlala eNigeria."Ithimba laseNigeria, umzuzu odlala umdlalo wakho wokuqala, uzobizwa nge-superstar. Umzuzwana odlala umdlalo wakho wokuqala wokuqala, ngisho nabazali bakho bangakubiza ukuthi usuke ubeka enkingeni "
Ngo-Mashi 2004, u-Oliseh umisiwe futhi kamuva wathathwa uBorussia Dortmund ngemuva kokubamba iqhaza ekhanda uVahid Hashemian ngenkathi eboleke imali eVfL Bochum, ngokusolakala ukuthi ukhuluma ngokucwasa ngokwebala. NgoJanuwari 2006, eneminyaka engu-31, u-Oliseh washiya umqeqeshi webhola ngemuva kokudlala inkathi yesiqingatha kwiqembu eliphezulu laseBelgium KRC Genk.
I-Sunday Oliseh Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Thumela umhlalaphansi
Njengomdlali webhola webhola lezinyawo, into ebi kakhulu engenzeka kumunye umhlalaphansi. Lapho umdlali webhola webhola lebhola ethatha umhlalaphansi, amadoda aneminyaka engu-65 ubudala asebabiza ngokuthi abantwana. Njalo kunjalo ngeSonto Oliseh.
Njengoba iSonto u-Oliseh ehlala umhlalaphansi, umndeni wakhe wawunethemba lokuthi uzokwenzela imali. Ngesibambiso sokungaqedi, u-Oliseh wathi, "Kunendlela eyodwa kuphela yokuqhubeka nayo; ... qhubeka nemfundo.". U-Oliseh waya eNorth England ukuze aqhubeke nemfundo ngokuthola ilayisense ye-UEFA Professional Coaches License eyamkhokhela imali eningi. Ngesikhathi lokho kuqhubeka, waqala olunye uhambo ngokuba ngumxhumanisi wezemidlalo we-German Television, i-CNN futhi usebenzela iFIFA njengengxenye yeqembu lobuchwepheshe lobuchwepheshe.
U-Oliseh akazange alahlekelwe ngemuva kokuthatha umhlalaphansi. Ngokungafani nabangane bakhe abaningi, icala likaSonto lalihlukile. Ngenxa yomkakhe, umkhaya wakhe waqala imikhuba emihle yokusebenzisa imali. Okubaluleke kakhulu, ukuqala umsebenzi wokuqeqesha wamsiza ukuba ahlangabezane nezidingo zomndeni wakhe nabangani bakhe. U-Oliseh uye wakwazi ukuthuthukisa umsebenzi ophumelelayo njengomphathi webhola ngokuqhubekisela phambili imfundo yakhe kuzo zonke izinto zebhola. Ukuthatha inkambo yeminyaka emithathu ekufundiseni futhi i-Diploma yokuPhatha kweBhizinisi yamsiza.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Sunday Oliseh Childhood kanye namaqiniso angabonakali we-biography. Ku-LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
I-Tare NgoMashi 13, 2019 Ku-8: 22 am
Ngithinta kanjani wena?